अण्डा धेरै नखानुहोस यस्तो रो’ग लाग्ला ? – Gandaki Chhadke
अण्डा धेरै नखानुहोस यस्तो रो’ग लाग्ला ?
एजेन्सी । अण्डा शरीरको लागि धेरै स्वस्थ मानिन्छ । त्यसैले यसलाई सु’परफूड पनि भनिन्छ । तपाईं यसलाई उमालेर खानु सक्नुहुन्छ, पोच, फ्राई वा तरकरी बनाएर खान सकिन्छ । धेरै मानिसहरूलाई ह’तारको तरकारी भनेर अण्डा धेरैलाई मन पर्छ। धेरै पोषकहरू अण्डाहरू जस्तै प्रोटीन, खनिज, भिटामिन र स्वस्थ बोसोमा पाइन्छन्, तर, के तपाईंलाई थाहा छ धेरै अण्डाहरू खाने स्वास्थ्यको लागि पनि हा’निकारक हुन सक्छ । एउटा अध्ययनले पत्ता लगाए अनुसार धेरै अन्डा खानेलाई डा’यबेटिसको जो’खिममा हुन सक्ने देखाएको छ ।
चीनको चाइना मे’डिकल युनिभर्सिटी र कतार युनिभर्सिटीको नयाँ अध्ययनले यस्तो पत्ता लगाएको छ । हरेक दिन एक भन्दा बढी अण्डा से’वन गर्दा म’धुमेहको ख’तरा ६० प्रतिशत संभावना रहेको देखिएको छ । यी अध्ययनहरू पो’षण ब्रिटिश ज’र्नलमा प्रकाशित भएको छ ।अध्ययनले हरेक दिन अण्डा खाने मानिसहरुले प्रत्येक दिन अण्डा खाने बानीका कारण मानिसहरुको शरीरमा प्रति ग्राम अण्डाको मात्रा बृद्धि भएको थियो । अध्ययनले पत्ता लगाए अनुसार हरेक दिन ३८ ग्राम अण्डा खानेमा म’धुमेहको जो’खिम झन्डै २५ प्रतिशतले बढेको छ र हरेक दिन ५० ग्राम भन्दा बढी अण्डाहरूको जो’खिम ६० प्रतिशतमा बढेको देखाएको छ ।
अण्डा र म’धुमेहबीचको सम्बन्धमा बारम्बार ब’हस भइरहेको छ । डाक्टरहरू भन्छन् खानपानका कारण टा’इप २ म’धुमेहबीच ग’हिरो सम्बन्ध छ । म’धुमेह सही खाना र पे’यको साथ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।म’धुमेहका वि’रामी दैनिक बढिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सं’गठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकका अनुसार विश्वका करिब ६ प्रतिशत मानिसहरु ख’राब जीवनशैलीका कारण यस रो’गबाट पी’डित छन् र यसको संख्या निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ। सही खानाको साथसाथै सही जी’वनशैली पनि म’धुमेह नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
म’धुमेहको जो’खिमबाट ब’च्न हामीले हरियो पा’तदार तरकारीहरू खानुपर्दछ । पालक, तीतो करेला, ब्रो’कोली, गाजर, मे’थी, बन्दागोभी, टमाटर, काक्रो र हरियो बी’न्स जस्ता चीजहरू खानु पर्दछ । यी सबै चीजहरू म’धुमेह रो’गीमा धेरै ला’भदायक हुन्छन्। यसमा उपस्थित ए’न्टिआक्सीडन्टहरूले मुटु र आँखालाई स्वस्थ राख्छ। र’गतमा चिनीको मात्रा बढ्यो भने उच्च स्टा’र्च भएको तरकारीहरू खान हुँदैन। मधुमेह भएको खण्डमा आलु, फूलगोभी, मकै, सिमी फली, मटर, चना, मसूर र मीठो जस्ता चीज खानु हुँदैन ।
महिलाहरुले अनुहारको अनावश्यक रौं फा’ल्न एउटा घरेलु उपाय